Farany, ny antony nisarahan'i Brad Pitt sy i Angelina Jolie dia nanambara - teles relay
Nangina taorian'ny nisaraham-panambadiany tamin'ny mpilalao amerikana Brad Pitt, i Angelina Jolie dia nanapa-kevitra ny hamaha ny kitapony ary hanome ny antony mahatonga an'io fisarahana io.
I Angelina Jolie sy i Brad Pitt no mpivady mahafinaritra indrindra tany Hollywood. Mianjera amin'ny fitiavana ny andry amin'ny sarimihetsika "Mr. sy Ramatoa Smith » tamin'ny 2004, ny kintana roa dia namela fitiavana tonga lafatra ary niray hina mihitsy aza tamin'ny fatoran'ny mariazy tamin'ny 2014 tamin'ny fananany frantsay, tao amin'ny Château de Miraval.
Afa-po, nanambady an'i Maddox (18), Pax (16) ary Zahara (15) ihany koa ny mpivady, talohan'ny niterahany an'i Shiloh (14), Knox sy Vivienne (12 tamin'ny Jolay), herintaona taorian'izay. rehefa avy nanamarina ny fifandraisan'izy ireo.
Mampalahelo anefa fa tsy nandeha araka ny nantenaina ny zavatra. Nivaky ny mpivady roa taona taty aoriana. Angelina Jolie dia nanambara fa tsy handalo intsony ity riaka ity ary mitaky ny hitondrany irery ny zanany enina ihany. Na izany na tsy izany dia tsy mbola nohazavain'ny iray tamin'izy ireo mihitsy ity faharatsiana ny mpisehatra roa ity.
Noho izany, maro ny tsaho hipoitra amin'ity fisarahana ity. Ny fampitam-baovao sasany dia mitantara ny tsy fitovian-kevitra momba ny fanabeazana ny ankizy, ny hafa kosa mino fa tsy mifanaraka amin'ny fiainam-panambadiany ny fandaharam-potoanany.
Na izany aza, ny fampanginana ny tsaho azy dia niverina tamin'ny vanim-potoana niainany ilay mpilalao sarimihetsika Angelina Jolie ary nanolotra tsiambaratelo vitsivitsy. Eny tokoa, efa-taona taorian'ny fitsaharana am-pahibemaso ity, dia niverina mba hanome ny antony ny mpilalao sarimihetsika. Nanao izany izy nandritra ny tafatafa nivoaka tamin'ny zoma 19 jona nataon'ny Vogue India.
“Nisaraka aho mba hahasoa ny fianakaviako. Fanapahan-kevitra tsara izany, hoy izy. Manohy mifantoka amin'ny fanarenana azy ireo aho. Ny sasany dia nanararaotra ny fahanginanako ary ny ankizy dia mahita lainga momba ny tenany ao amin'ny haino aman-jery, saingy ampahatsiahiviko azy ireo fa mahalala ny fahamarinany manokana. Raha ny marina, tanora enina izy ireo dia be herim-po sy matanjaka ”manazava ny mpilalao sarimihetsika.
Tapitra eo ny tsaho.
Ity lahatsoratra ity dia niseho voalohany tamin'ny: https://afriqueshowbiz.com/angelina-jolie-et-brad-pitt-les-raisons-de-leur-separation-enfin-devoilees/
Na i John Fru Ndi dia tsy nampihatra ny toeran'ny mpitsoa-ponenana tany Etazonia